Muummichi ministeeraa gara Asmaraa imale - NuuralHudaa
Muummichi ministeeraa gara Asmaraa imale
Last updated Jul 8, 2018 25
Muummichi ministeeraa Dr Abiy Ahmad har’a ganama gara Eertiraa kan imale tahuu hoogganaan waajjirra muummicha ministeeraa Obbo Fitsum Araggaa beeksise. Dr Abiy imala isaa kanaan waldhabdee biyyoota lamaan jidduu ture furuudhaaf prezdaant Isaayyaas Afaworqii waliin ni mari’ata.
Jila Mootummaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Dr Abiy Ahmadiin hoogganamuuf Asmaratti simannaan hoo’aan godhameef. Prezdaant Isaayyaas Afaworqii fi qondaaltonni ol’aanoon biyyattii buufata Xiyyaara Asmaraatti argamanuu simatanii jiru. Ummanni magaalaa Asmaaraatis daanditti bahuudhaan gammachuu isaa ibsatee jira.
Dr Abiy AhmadEertiraamuummicha ministeeraa
May 20, 2022 sa;aa 5:18 pm Update tahe